Vonjy aina :: Manana tahirin-dra mahavita telo andro ny hopitaly HJRA • AoRaha
Vonjy aina Manana tahirin-dra mahavita telo andro ny hopitaly HJRA
Natao hisorohana ny mety tsy ho fahampian’ny tahirin-dra ao amin’ny trano fitehirizana no anton’ny amin’ny fano­mezana ra maimaim-poana etsy amin’ny sampana fanomezan-dra etsy amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra)
Ampefiloha. Efa manana tahirin-dra azo ampiasaina hatramin’ny telo andro ity hopitaly ity saingy mety tsy haharaka izany rehefa
betsaka loatra ireo marary mila ra ao aminy.
“Manodidina ny dimampolo amby zato ny olona tonga manome ra maimaim-poana eto aminay. Misy fotoana, mahatratra hatramin’ ny zato na mihoatra izay koa ny isan’ny olona mila izany, ka mahatonga anay manangona any ivelany fa tsy mionona amin’izay ato fotsiny mba hanavotana ireo mila ra maika”, araka ny fanazavan’ny mpitsabo iray eo anivon’ity sampana fanomezan-dra etsy amin’ny HJRA, nandritra ny hetsika fanomezan-dra maimaim-poana nataon’ny fikamba­nana tsy miankina iray teny an-toerana, omaly.
Ahitana ny sokajin-dra ilain’ny marary ao amin’ny tahirin-dra. Fantatra fa tranga mety miseho eny amin’ny tobim-pahasalamana ny fisian’ny olona maro be mila sokajin-dra mitovy ao anatin’ ny iray andro. Ny sampandraharaha misahana ny fiterahana ; ireo olona iharan’ny lozam-pifamoivoizana sy ireo zazakely ary ireo olona voan’ ny homamiadana isan-ka­razany no fantatra fa tena mila fampidirana ra.
Ireo mpiasa manodidina ny telopolo avy amin’ny fikambanana tsy miankina, Medair, no tonga nanome ra maimaim-poana tetsy
amin’ny Hjra, omaly. Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fanomezan-dra amin’ ny zoma ho avy izao no antony nahatongavan’ireo mpiasa ireo. “Ny daholobe no entanina handray anjara amin’ny fanomezan-dra an-tsitrapo satria ny manome ra dia mano­me aina”, hoy Rakotomavo Christelle, tompon’ andraikitry ny serasera eo anivon’ny fikambanana tsy miankina, Medair.
Zotra nasionaly sy rezionaly Hametrahana fitaovana fanarahan-dia na GPS ihany koa ny taksiborosy
Faharatsian’ny toetrandro Hihamafy sy mety hiova isan-taona ny fisehon’ny rivo-doza
Fanadinana BEPC Hanomboka amin’ny alatsinainy ny fandraketana ny naoty ao anaty solosaina
“Ny asako rahampitso” :: Mpianatra efatra arivo mahery nahazo torolalana